Wholesale King uye Mambokadzi Couple T-shati Mugadziri uye Mutengesi | Chinhu
Ichi chigadzirwa chakabudirira kuwedzerwa mungoro!
Wona yekutengera Ngoro
Dzokera Kutenga Enderera ku Checkout
Kazhinji yenguva, hukama hwedu hunoda kukosheswa nenzira dzakasiyana. Kudana wawakaroorana naye nemazita akasiyana anoyevedza uye mazita ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekuratidzira nekutenda rudo rwako.
Hakuna zita kana zita rinodakadza uye rakakwana saiye `` Mambo '' uye `` Mambokadzi ''. Aya mazita ane chirevo chakakosha pamwe nawo; aya mazwi anoita kuti mumwe wako anzwe akakosha muhupenyu hwako.
'' Ndiwe Mambokadzi Wangu '' chirevo chakareruka chisingataurike mushoko iri.
Kupenda aya mazwi, hapana kanivhasi ichave yakaringana seMatching Couple T-Shirts. Izvi zvipfeko zvakaita seT-shirts, Hoodies, Sweatshirts zvinogona kugadziridzwa zvinoenderana nechero chiitiko. T-shirts ane mazita ehumambo naMambokadzi ichave iri inonakidza kwazvo uye isingakanganwike chipo kune wako / mukadzi.
Pano mukatalog yedu, isu tine chinonyanya kufadza uye chinonakidza chigadzirwa, kureva, King naMambokadzi T-shirts. Aya maT-shirts haango gadzirire iwe chete asiwo anokupa iwe kutaridzika kutsva uye kwakakwana.
Kana iwe wakaneta neakareruka T-shirts uye uchida kupemberera rudo rwako, saka aya maT-shirts ndeako iwe. Iwe unogona kufunga nezvekutenga aya King naMambokadzi T-shirts pane edu mazano.
Mune rimwe pakiti reT-shirts, iwe unowana maT-shirts maviri.
Chikamu chimwe chichava chaMambokadzi, uye chimwe chichava chaMambo.
Iwe uchawana 14% kubviswa pane imwe paki.
Round hem nehafu sleeve zvinokuita iwe wakanaka uye wakasununguka.
Iwo maT-shirts zvakagadzirirwa kukuita kuti unzwe uye utaridzike saMambo naMambokadzi.
Imwe T-shati ichave ine zita rekuti King ine korona pairi.
Imwe T-shati ichave yaMambokadzi ine korona pairi.
SKU: # 001 - Mudura
USD $49.00 USD $39.00 (% kure)
Pashure: Hubby Wifey Couple T-shati
Zvadaro: Mr Mai Couple Sweatshirt
King naMambokadzi Couple T-shati Unisex
T-shati yaMambo naMambokadzi Couple
King naMambokadzi Tsika Yakaroora T-Shirt
King naMambokadzi Mapenzi Couple T-shati
T-shati yaMambo naMambokadzi Honeymoon
King naMambokadzi Vakangoroora T-shati
King uye Mambokadzi Kufananidza Couple T-shati
T-shati yaMambo naMambokadzi Valentines Day